Yuu ahaa Paul Farmosa, ninkii Al Shabaab ay ku dishay magaalada Bosaaso? - BBC News Somali
Yuu ahaa Paul Farmosa, ninkii Al Shabaab ay ku dishay magaalada Bosaaso?
Xigashada Sawirka, Paul Anthony
Marxuum Paul Anthony Farmosa
Paul Anthony Farmosa oo u dhashay dalka Malta ayaa waxaa uu dhashay sanandkii 1966, waxaa uu na wax kusoo bartay dalka Malta oo uu u dhashay. Waxaa uu bartiisa LinkedIn uu ku qoray in uu bartay maareynta dekedaha.
Sannadihii 2013-ka ilaa iyo 2016 waxaa uu kasoo shaqeeyay dekedaha dalka Sudan, halkaasi oo uu ka ahaa maareye ku xigeen, waxaana sidoo kale uu kasoo shaqeeyay dalal ay kamid yihiin Moroco, Imaraadka Carbata.
Paul ayaa sidoo kale ahaa tababare arrimaha dekedaha iyo maamule aqoon durugsan u lahaa howlaha dekedaha.
Intii u dhaxeesay bilihii Janaayo ilaa iyo Luuliyo ee sannadkii 2017-ka waxaa uu sheegay in uu kasoo shaqeeyay dalka Guinea, wixii intaa ka dambeeyay na waxaa uu bishii Agoost ee sannadkii 2017-ka uu ka shaqo bilaabay magaalada Bosaaso ee Soomaaliya, halkaasi oo uu uga shaqeynayay shirkadda maamusho dekedda Bosaaso ee DP World, kana ahaa maareyaha dekedda.
Baarlamaanka Puntland oo ansixiyey qandaraaska DP World ee dekada Boosaaso
Jabuuti: 'Waxaan la wareegnay saamigii DP World ee dekadda Dooraale'
Gudoomiyaha gobolka Bari ayaa sheegay in Paul saaka aroorti lagu dilay guri uu degenaa oo aan sidaasi uga fogeyn dekedda Bosaaso.
" Ninkaasi xabadihii lagu dhuftay ayuu u dhintay, laba askari oo ilaaladiisa ahaa waa dhaawac, waxaa kale oo dhaawac ah nin Hindi ah oo uu u shaqeynayay, waxaana gacnta ku heynaa ninkii weerarka geystay oo dhaawac ah, waana la daweynayaa.". Sidaasi waxaa BBC-da u sheegay Gudoomiyaha gobolka Bari.
Mas'uuliyadda dilkan ninkan ayaa waxaa sheegatay xarakada Al Shabaab.
Waxaa la isweydiinayaa qaabka ninka dilka geystay ay ugu suura gashay in uu xitaa tago meel u dhaw dekedda Bosaaso oo la ogyahay in ammankeeda aad loo ilaaliyo.
Guuleyd Saalax oo ah guddoomiyaha machadka daraasaadka ee SIDRA ayaa BBC-da u sheegay in habacsanaan dhanka ammaanka ay jirto.
"Runtii waa arrin u baahan baaris iyo isla xisaabtan, waxaana qiyaasayaa in habacsanaan dhanka ammaanka ay jirto, inkastoo la yiri ninkani wuxuu isku soo qariyay kalluumeysatada". Ayuu yiri.
Dekedda ayaa waxaa maamulo shirkad ay leedahay DP world, waxaana sanandkii 2017-ka ay shirkadaasi heshay heshiis 30 sanno ah oo ay ku maamuleyso kuna maalgelineyso dekedaasi, taasi oo buuq badan ka dhalisay Somaliland iyo Puntland.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa heshiisyadaasi ku tilmaamtay kuwa aan waafaqsaneyn sharciga, iyadoona shirkadda DP World ku eedeesay inay ku xadgudubtay madaxbanaanida Soomaaliya, waxaana xigtay in barlamaanka Soomaaliya uu soo saaray xeer shirkadaasi looga mamnuucayo guud ahaan Soomaaliya.
Go'aanka barlamaanka Soomaaliya ayaa dhaliyay xiisad diblomaasiyadeed oo ka dhex dhalatay dalalka Soomaaliya iyo Imaraadka, walow go'aanka DP world uusan ka dhaqan gelin Soomaaliya.
Maxamed Ciise Cumar iyo Maxamed Shekh Axmed oo keliya ayaa ka badbaaday doontii musiibadu qabsatay
Kumuu ahaa hoggaamiyihii is qarin jiray ee Shabaab ee uu Boqor Buurmadow soo hadal qaaday?
Ra'iisal wasare hore oo loo haysto dilka xaaskiisa
Abiy Axmed oo baaq u diray TPLF xilli dagaalka sokeeye uu galay waji adag
'Muslimiintu waa bulshada ugu yar, balse ugu sadaqada badan'